Sahy tafahoatra ve ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana?
2010-05-18 @ 23:17 in Politika
Miarahaba indray ny mpamaky. Elaela tsy nanoratra. Saiky hanao tatitry ny dia fa toa tsy mety tontosa ka aleo hilaza vaovao fohifohy misy eto an-toerana. Manomana hetsika ny HMF ny alarobia sy ny alakamisy. Ny alarobia 19 mey (tsaroanareo ve ny 1929? sa tsy fantatrareo? izany no filaharambe voalohany teto Antananarivo nitakiana ny fahaleovantena tamin'ny andron'ny fanjanahantany) dia natokana ho an'ny Mpiandry, tsy nolazaina ny toerana hanatontosana azy fa hetsika handroahana ny devoly sy Satana hiala eo amin'ny fitondrana no fahazoako ny ambangovangon'ny resaka nataon'izy ireo! Ny alakamisy kosa dia ho an'ny daholobe amin'izay ka ny ora manomboka amin'ny 11 ora atoandro fa tsy mbola nolazaina ihany koa ny toerana. Izany hoe matoa tsy nolazaina dia noho ny stratejia, ary manaraka izany raha toerana fandehanan'ny daholobe dia tsy nangatahana alalana any amin'izay tokony hanaovana izany.
Fa ny tena nahavaka ny mpihaino ny Radio iray dia ny fahasahiana niteny nananan'ireo mpitondra fivavahana niresaka ny andron'ny alatsinainy. Tena na dia mpandala ny ara-dalàna aza ny tena dia natahotra sy nanahy indray. Tena sahy izany ry zareo a! Ny tadidiko dia nolazain'izy ireo fa tsy araka an'Andriamanitra ny fitondrana eto amin'izao fotoana izao, ary niampy izany ka nolazainy fa (misy olona zanak'i) satana no mitady hibodo fahefana ka ny asa manomboka izao dia ny hanala ny devoly sy satana tsy hitondra an'i Madagasikara intsony. Satana satria mpamono olona sy rain'ny lainga ary tsy mety misy marina izay ambarany ka ny nisintonany izany filazana izany dia izay hita ao amin'ny Jaona 8:44 ho an'izay mahay mijery baiboly. Dia miandry aho hoe hisy ve ny fisamborana ireo niteny izany?
Vao tsy ela no nisy mpitondra amin'izao fotoana izao nilaza fa handray ny andraikiny fa tsy azo atao intsony ny mivorivory hanohitra... Dia nisy ny fisamborana ilay mpanao politika iray nampangaina ho naniratsira ny "filoham-panjakana", fa mbola nihajabe ny an'ilay nosamborina raha nampitahainy tamin'izay notenenin'ireo mpitarika ny HMF tamin'io alin'ny alatsinainy io. Dia hoy aho hoe hisy fisamborana ve ny talata na ny alarobia na ny alakamisy? Ny talata aloha tsy nandrenesana nainona na inona fa ny andron'ny alarobia isika mety hahita ny tohiny. Toy ny fihatsiana hoe sambory ary izahay manko ny votoatin-dresaka tamin'io fotoana io nefa toa tsy mbola hita aloha izay fihetsika avy amin'ny manana ny herim-pamoretana. Fa raha tsy misy ny fisamborana dia mety hijery ny tohiny ve izy ireo? Koa raha mahazo olona any amin'ny toerana mbola tsy notononina hatreto amin'izay dia hanao akory? Sa sao efa misy mahafantatra kosa fa misy hery mizara any ambadika any ka manahy ny ho tohin'ny fikasana fisamborana ny sasany? Fanontaniana avokoa izany rehetra izany fa dia ho hita ny tohiny.
Jentilisa, alarobia 19 mey 2010 amin'ny 01:11